Maxaad ka taqaan Madaxda Dowladda Somalia ? Dhab ka hadal taxane noqon doona.
15 Janaury 2013 Waagacusub.com- Warbaahinta Waagacusub oo mudo ka badan boqol maalmood ka gaabsatay ka hadalka Madaxda cusub ee Dowladda Somalia iyo Urur diimeedka Dam Jadiid waxay dhawaan bilaabeysaa Musasal la magacbaxay DHAB KA HADAL ama MAXAAD KA TAQAAN MADAXDA DOWLADDA SOMALIA?. Warbixintaan waxaan ku lafa guri doonaa taariikh nololeedka madaxda ugu sareeysa ilaa kuwa ugu hooseeya Dowladda Federalka Somalia iyo Madaxda Maamul goboleedyada si bulshada u ogaadaan shaqsi walba taariikhdiisa wanaagsan iyo tan xun.
Lafagurka Qormooyinka Waagacusub waxaa looga sheekeeyn doonaa Siyaasi kasta meesha uu ku dhashay,barbaarintiisa,hooyada dhashay,Waxbarashadiisa,Caruurta uu dhalay,Xaasaska uu guursaday,xilalkii uu soo qabtay,wixii uu wanaag falay iyo wixii uu xumaan falay.
Lafagurka wuxuu taaban doonaa arrimo xasaasiya hasse yeeshee waxaa naga reeban inaan sameeyno buun buunin ama ka been sheegid.
Dhamaan Qormooyinkeena waxaa lagu sameeyn doonaa baaris inta aan la faafin si loo xaqiijiyo sidoo kalena Akhristayaasha waxay ka qeybqaadan karaan baarista lagu sameeynaa Madaxda Somalia.
Shaqsi kasta, oo dabagalkeena khuseeyo waxaan la sameeyn doonaa xiriir si uu isu difaaco ama uga gaabsado.
Dabagalka cusub wuxuu la jaanqaadayaa qaabka Warbaahinta Caalamka u dabagasho madaxda dunida ,waxaana ku bilaabi doonaa Qoraal,iyadoo kadibna aan ka dhigi doono Maqal iyo Muuqaal.
Wejiga hore ee DHAB KA HADALKEENA waxaan ku lafa-guri doonaa Masuuliyiinta kala ah:
1- Madaxweynaha Somalia Hassan Mohamud Alasow 2- Ra''isulwasaraha Xukumadda Federalka Abdi Farah Shirdoon (Saacid)
3-Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Mohamed Osman Jawari
4- Gudoomiyaha Maxkamada Sare , Caydiid Ilka Xanaf
5- Raísulwasare ku xigeen ahna Wasiirka Arrimaha dibadda Fawzia Yusuf Haji Adan
6- Wasiiru Dowlaha Madaxtooyadda Farah Abdulkadir
7-Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Cabdi Kariim Hussien Guuleed
8- Agaasimaha Hay''ada Nabadsugida Ahmed Macalin Faqi
9-- Taliyaha Boliiska Soomaaliyeed Shariif Sheekhunaa Mayee.
10-Wasiirka Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Abdullahi Ciil-Mooge Hersi
Fadlan hadii aad heysid xog ku saabsan Madaxda halkaan magacyadooda aan ku xusnay nala wadaag inaad gacan naga siisid,anagoo xog walba baaris ku sameeyn doona si loo xaqiijiyo.
Hadii aad joogtid Yurub ama North America fadlan fariintaada noogu dhaaf Voice +16122235405 Sii akhri Wararkeena Waagacusub.com